China Pet namanabukeni Ukwenziwa kunye Factory | KwiBondhot
Njengomnye wamanqatha aphambili alahlwayo kunye nabavelisi bezicubu, sinako ukuhambisa iimveliso ezigqwesileyo kuwe, njengeNyakatho Melika, iYurophu, uMbindi kunye noMzantsi Melika, iAustralia, iJapan, ingingqi yeAsia Pacific, njl. wamkelekile. Iqela lethu elomeleleyo likulungele ukukunika uyilo lwangempela kunye neengcebiso.
Umthamo wethu ubuncinci iitoni ezingama-60,000 ngonyaka. Apha sinemithombo yezinto eziphathekayo, abasebenzi abanezakhono, iiteknoloji kunye netyathanga lomzi mveliso ovuthiweyo. Qingdao kunye Lianyungang Port bonke kufutshane kuthi, ukuthuthwa kuya kuba lula kakhulu.
Siza kwenza konke okusemandleni ethu ukubonelela ngeemveliso ezilungileyo kunye neenkonzo kubathengi bethu kwihlabathi liphela!
I-pet diaper, luhlobo lwezinto zokufunxa, ikakhulu ezenziwe ngomgubo womqhaphu kunye ne-polymer absorbent, esetyenziselwa ukufunxa i-pet excreta, inqanaba lokufunxwa kwamanzi linokufikelela kumthamo wazo, ukufakwa kwamanzi kunokwandiswa kube yimilo yejeli, akukho kuvuza, akukho kuncangathi izandla. I-embouchure ekhethekileyo ebusweni be-diaper iya kukhawuleza ukuwukhupha umbane. Iqulethe arhente antibacterial phambili, nto leyo deodorize nokuphelisa ivumba ixesha elide.
Iipads zoqeqesho lwenjana ezilahlwayo eziPhezulu
Izinto eziphathekayo: I-3G ye-SAP (i-Super Absorbent Polymer)
Ubungakanani beemveliso: 60cm x 60 cm
Iphakheji: 50pcs zipakishwe kwibhanti enekhadi lombala, i-400pcs kwibhokisi.
Ubukhulu beCarton: 62 * 42 * 42 cm
1) kwizinga eliphezulu ethambileyo non-ephothiweyo ilaphu.
2) 6 maleko okhuseleko.
3) ukhuseleko lwe-antibacterial
4) Ukukrazula izembozo ezinganyangekiyo.
5) Izicubu ezifunxa kakhulu
6) Ungathathi cala kwivumba
I-7) Inuka kamnandi ukutsala izilwanyana zasekhaya
8) Ifakelwe imicu yokuncamathelisa ngokulula
9) Kulula ukulahla
10) Ibandakanya i-3g yeSupermer eyi-Absorbent Polymer (ingeniswe eJapan)
11) Ukungenisa ngaphakathi kwi-USA
Ubungakanani ngokweemfuno zabathengi
Umbala Umgangatho njengomfanekiso, okanye ngokwenani lombala we-PMS yomthengi
Umq 10000 Piece / Pieces, 900000 Piece / Pieces Inyanga nganye
Ixesha lokuzisa Kwiintsuku ezingama-35 emva kokufumana idipozithi engama-30%.
Hambisa iMigqaliselo FOB, Lwemipu, CIF; Lianyungang, Qingdao, China (wase-)
Iphakheji Ibhegi yePoly, emva koko ithunyelwa ngaphandle kwebhokisi.
Uyilo Uyilo loMthengi lwamkelekile
Emva kokuThengisa Ingxelo kwi-Inspirer Pet, malunga noMgangatho, iNkonzo, Impendulo yeNtengiso kunye neengcebiso. Kwaye sinokwenza okungakumbi ukwenzela wena
Okulandelayo: Amanabukeni ezilahlwayo ezilahlwayo